Maxaa Ka Cusub Qaraxii Beyruut? | Xaqiiqonews
Maxaa Ka Cusub Qaraxii Beyruut?
Shakiga ka dhashay qaraxii weyna ee caasimadda Lebnaan ka dhacay 4-ta bishan Agoosto waxaa uu noqon doonaa mid muddo badan taagnaan doono”, maxaa yeelay xaaladda waddanka oo ah mid murugsan oo ay hareeyeen nooc walbo oo khilaaf, mid kooxeed iyo mid diineedba.
Qaraxan aadka u weyn ayaa sameeyey muuqaal u eg geedka Boqoshaa (mushroom)
Qaraxa ayaa sida la aaminsanyahay ka dhashay maadadad Amooniyom Naytaret oo la dhigay baqaar ku dhaw dakkadda weyn ee Bayruut.
Webseetka Shiparrested, oo ah webseet qaabilsan farsamada iyo qaanuunka ayaa sanadkii 2015 qoray warbixin ku saabsan doon sidata calanka Moldovan,oo bishii April ee sanadkii 2013 ku xiratay Beyruut doonta oo sabab farsamo darteed halkaasi ugu xiratay ayaa siday tan dhan 2750 oo ah maadada Amooniyam Naytareet.
Waxaa kale oo suuragal ah maadada qaraxday in ay lahaayeen kooxaha muqaaqamada, gaar aahaan ururka Xisbulaahi kaasi oo xakunka dalkaasi la wareegay tan iyo markii la dilay Rafiiq al xariiri oo ahaa ra’iisal wasaarihii dalka, waliba Xisbulaah ayaa gacanta ku heysa dekadda iyo garoonka Bayruut.
Sidoo kale waxaa jira eedeymo farta ku fiiqaya Yahuudda, walow Israa’iil ay iyada iska fogeysay mas’uuliyadda qarax qasaaro badan dhaliyey kaasi oo aan kala saarin yar, weyn caruur iyo haween.
Wararkii ugu dambeeyey oo ka soo baxa wasaaradda Caafimaadka Lebnaan ayaa lagu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen in ka badan 137, halka dhaawacana uu sii caga cageynayo 5 kun oo qof.
Maalin aysan hilmaami doonin reer Lebnaan
Waxa ay aheyd maalin aysan hilmaami doonin Lebnaaniyiinta, waxa ayna ku reebtay xasuus ay uga sheekeyn doonaan caruurtood, sida laga dheehan karay akoonada baraha bulshada ee dadka reer Lebnaan.
Dhanka kale waxaa jira dad badan oo caan ah oo taageero u muujiyey , siyaasiyiinta dibolaamsiyiinta iyo shakhsiyaad kale kuwaasi baraha bulshada ku muujiyey jaceylka ay u qabeen reer Bayruut iyo sida ay ugu naxsanyihiin waxa dhacay.